ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် ကော်ဖီဖျော်စက် - Coffee Makers for Coffee Lovers
ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် ကော်ဖီဖျော်စက်0447
Happy First Day of March and Let’s get ready to step into Summer!
မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး နှစ်သစ်ရဲ့ နွေသစ်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ Shop App MM မှ ဦးစွာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ကိုမှ အကြိုက်တွေ့သူများအတွက် ကော်ဖီဖျော်စက်များအကြောင်းကို ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မစခင်မှာ ကော်ဖီဖျော်စက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံရာဇဝင်ကို ဗဟုသုတရဖွယ် အရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်….
မယ်လစ်တာဘန့်ဇ် (Melitta Bentz) ဆိုသူ ဂျာမန်စွန့်ဦးတီထွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မနက်ခင်းတွင် ကော်ဖီ‌သောက်နေရင်း ကော်ဖီအနည်ကထွက်တဲ့ အခါးဓာတ်ကို ဖယ်ရှားချင်တဲ့အတွက် ဆီစုပ်စက္ကူဖြင့် အနည်စစ်နည်းကို စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် စက္ကူဖြင့်အနည်စစ်တဲ့ ကော်ဖီဖျော်စက်ကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ကော်ဖီဖျော်စက်လို့ ပြောလိုက်ရင် မယ်လစ်တာဘန့်ဇ်ကိုပဲ လူသိများကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အေဒီ ၅၇၅ ကတည်းကပင် တူရကီလူမျိုးများသည် ကော်ဖီ စတင်နှပ်နေခဲ့ကြပြီဖြစ်ပြီး ကော်ဖီဖျော်ကရားပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ၁၈၁၈ ခုနှစ်ထိတိုင်အောင် နစ်မြုပ်နေတဲ့ ရာဇဝင်များကို ဘယ်သူမှသေချာ မသိခဲ့ကြပါ။
ယနေ့ စျေးကွက်ထဲရှိ များစွာသော အဆင့်မီကော်ဖီဖျော်စက်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တချို့ကို ကော်ဖီချစ်သူများအတွက် ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် မိုင်ဒီယာ (Midea) ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် လူကြိုက်များတဲ့ Coffee Maker လေးက ချစ်စရာကောင်းသလို Fast Heating System, Shower Head, One Press Control, Boil Dry Protection အစရှိတဲ့ အမိုက်စား Functions များလည်းပါဝင်ပါတယ်၊။ အချိန် ၅ မိနစ်ပေးရှိနဲ့ အနံ့အရသာပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရရှိဖို့ဆို Midea ရဲ့ MAD-202R Coffee Maker လေးတစ်ခုဆောင်ထားသင့်တယ်နော်။
စျေးနှုန်း – ၃၉,၀၀၀ ကျပ်
Philips – The Netherlands Brand
Philips – The Netherlands Brand (HD7447/00)
၁၈၉၀ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံထုတ် Philips အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ HD7447/00 Coffee Maker လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ပါဝါ 1000 W စွမ်းအား၊ ရေ ၁.၂လီတာနဲ့ ကော်ဖီ ၁၀ ခွက်ကျော်အထိ ဖျော်စပ်ပေးမယ့် Philips အဖျော်စရာလေးကတော့ ၈ လက်မပတ်လည် ၁၁ လက်မအမြင့်သာရှိတာဖြစ်လို့ နေရာယူသက်သာပြီး ထားသိုရအဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးပါ။
စျေးနှုန်း – ၁၁၅,၀၀၀ ကျပ်
NESCAFE Dolce Gusto by KRUPS – Germany Brand
ဂျာမဏီ brand ဖြစ်တဲ့ KRUPS မှ NESCAFE နဲ့အတူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pod Coffee Machine လေးက ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး Espresso, Cappuccino ပုံစံ (၆) မျိုးအထိ ဖျော်စပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲရ အဆင်ပြေလွယ်စေတဲ့ Easy Touch Function နဲ့ဖြစ်လို့ တကယ်အကြိုက်တွေ့စေမှမယ့် Coffee Maker လေးဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း – ၂၄၀,၀၀၀ ကျပ်
Beko – Turkey Brand
Beko – Turkey Brand (CEP5152B)
ဥရောပနံပါတ် (၁) အိမ်သုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ တူရကီထုတ် Beko ရဲ့ Espresso Maker CEP5152B က Shop App ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Top Rated စာရင်းဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်လို့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး‌နော်။ အာမခံ ၁ နှစ်ရှိပါပြီး Espresso ချစ်သူများအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
စျေးနှုန်း – ၂၀၉,၀၀၀ ကျပ်
Panasonic – Japan Brand
Panasonic – Japan Brand (NCGF1)
အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Panasonic ရဲ့ NCGF1 Coffer Maker လေးဟာဆိုရင် စွမ်းအင် 800W နဲ့အတူ တစ်ခါဖျော်လျှင် ကော်ဖီ ၁၀ ခွက်စာအထိ ဖျော်စပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Swing Basket with Mesh Filter, Drip Stopper စတဲ့ Function တွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
စျေးနှုန်း – ၆၄,၇၀၀ ကျပ်
DēLonghi – Italy Brand
DēLonghi Italy Brand (ECP 31.21)
DēLonghi ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ECP 31.21 Pump Espresso Coffee Machine ကို အီတလီနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားပြီး Auto မီးပိတ်ပေးသည့်စနစ်၊ ရေနွေးသီးသန့်ထုတ်နိုင်သည့်စနစ်၊
Coffee Tamper နှင့် ကော်ဖီမှုန့်စစ်ဇကာပါရှိခြင်း အစရှိတဲ့ Function များစွာပါရှိပြီး Espresso နှင့် Cappuccino ကောင်း၁ခွက်ကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်စပ်နိုင်တာဖြစ်လို့ Barista များအကြိုက်တွေ့မယ့် Machine လေးပါ။
စျေးနှုန်း – ၆၆၀,၀၀၀ ကျပ်
Electrolux – Sweden Brand
Electrolux – Sweden Brand (E2CM1-200W)
ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းဖြန့်ချီထားတဲ့ Electrolux – Drip Coffee Maker E2CM1-200W ဖြစ်လို့ ကွာလတီပိုင်းက ပေးတဲ့စျေးထက်ကို ပိုတန်နေပါပြီ။ ရေ ၁.၂၅ လီတာ၊ စွမ်းအင် 1000W, ၁.၇ ကီလိုအလေးချိန်နဲ့ အမြင့် ၁၂ လက်မနဲ့ ၁၀ လက်မဝန်းကျင်ပတ်လည်ရှိတာကြောင့် တစ်မိသားစုလုံးအတွက် အေးဆေးဖျော်စပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အာမခံ ၂ နှစ်လည်းပေးထားပါသေးတယ်တဲ့နော်။
စျေးနှုန်း – ၅၅,၀၀၀ ကျပ်
Power Pac – Singapore Brand
Power Pac – Singapore Brand (PPCM301 0.65L)
ကော်ဖီလား? လက်ဖက်ရည်လား? ခလုပ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံညက်ညောတဲ့ နှစ်သက်ရာသောက်စရာများကို Power Pac ရဲ့ PPCM301 0.65L Coffee Maker ကဖျော်စပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီအထိထိန်းညှိပေးတဲ့ Thermostatic Panel, Washiable Filter စတဲ့ Function များနှင့်အတူ ကော်ဖီ ၄ ခွက်စာ အေးဆေးဖျော်စပ်နိုင်တာမို့ တနိုင်တပိုင် ကော်ဖီဖျော်သောက်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Maker လေးပါ။
စျေးနှုန်း – ၄၁,၅၀၀ ကျပ်
Pensonic – Malaysia Brand
Pensonic – Malaysia Brand (PCM-1903)
Pensonic ရဲ့ ပါတိတ်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ဖျော်စက်လေးက Batik Series Coffee Machines ထဲက PCM-1903 ဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ ၁၀ ခွက်အထိ ဖျော်စပ်နိုင်ပြီး 900W, Removable Funnel with Nylon Filter, Anti-Slip Feet, Measuring Spoon အစရှိတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကလည်းသင့်တဲ့အတွက် Coffee ချစ်သူများ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Maker လေးပါ။
စျေးနှုန်း – ၅၄,၉၀၀ ကျပ်
ယခုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ Coffee Makers များသာမက တခြားသော ဖျော်စက်အမျိုးမျိုး သက်သာသောလျှော့စျေးနှုန်းနှင့်အတူ Shop App MM မှ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာဝယ်ယူရန် – ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
BekoCoffeeCoffee MachineCoffee MakerCoffee MakersDarazDaraz MMDaraz MyanmarDēLonghiDolce GustoElectroluxKRUPSMideaNescafeNescafe Dolce GustoPanasonicPensonicphilipsPower PacShop AppShop App MMShop MMshop.com.mm
Previous ArticleStay at Home, Workout with Shop!Next Article9 Top Rated Beauty Products